BBC-da Oo Cabasho Ka Dhan Ah Dawladda Iiraan U Gudbisay Qaramada Midoobey. | Haqabtire News
BBC-da Oo Cabasho Ka Dhan Ah Dawladda Iiraan U Gudbisay Qaramada Midoobey.
Iiraan:-(HTN) BBC ayaa ka codsatay Qaramada Midoobey in ay wax ka qabato dhibaatada dowladda Iiraan ay ku hayso shaqaalaheeda laanta Beershiya ee ku hadasha luuqadda Faarsiga ee ka hawlgala London iyo qoysaskooda ku nool gudaha dalka Iiraan.
BBC-du waxa ay sheegtay in dowladda Iiraan ay billoway olole cabsi gelin ah oo ka dhan ah qoysaska iyo shaqaalaha BBC-da, waxaana arrimahaasi ka mid ah hanjabaad, in la xirxiro ehelada weriyeyaasha iyo in laga mamnuuco safarada.
Dowladda Iiraan ayaa billowday in ay beegsato laanta BBC-da ee Beershiya kaddib doorashadii madaxtinimada ee lagu murmay ee sanadkii 2009, xilligaasi oo xukuumadda Tehraan ay rabshadihii ka dhashay doorashadaasi ku eedeysay quwado shisheeye.
Codsiga BBC-da ayaa lagu soo bandhigi doonaa kulanka golaha xaquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey ee maanta ka dhacaya magaalada Geneva.
Cabsi in la xiro ah
Bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafaya ayaa weriyeyaal ka tirsan BBC laanteeda Beershiya waxay qabteen munaasabad ah tacsiya ah oo ay u dhigayeen qof aysan waligood arkin.
Weriyeyaashani ayaa tacsiya u dhigayay aabaha mid ka mid ah shaqaalaha oo ku geeriyooday gudaha Iiraan.
Weriyaha uu aabihii geeriyooday ayay u suurtageli weyay in uu booqdo aabihiisa xanuunsan ama xitaa uu ka qeybgalo aaskiisa maadaama shaqaalaha laantaasi aanan loo ogolayn in ay Iiraan ku laabtaan.
Xaaladda noocaasi ah ayaa ah mid inta badan ay la kulmaan shaqaalaha BBC-da ee ka soo jeeda dalka Iiraan.
Shaqaalahan ayay dowladda Iiraan u aragtaa in ay u shaqeeyaan ajaaniib isla markaana ay jawaasiis u yihiin, waxaana xitaa ku adag in ay taleefoono kula xiriiraan qoysaskooda.
Gabar weriye ah oo u shaqeysa BBC-da ayaa hanjabaad looga soo diray gudaha Iiraan, waxaana laga dalbaday in ay joojiso shaqada ay BBC-da u haysa ama ay soo basaasta shaqaalaha kale ee ay iskala shaqeeyaan laanta BBC-da ee Beershiya, taa oo ay ku badalaneyso xorriyadda walaasheed oo 27 jir ah oo u xiran dowladda.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionTaageerayaasha dowladda Iiraan ayaa ka dibadbaxyo ka dhan ah BBC-da.
Gabar kale oo warka ka tirsan teleefishinka BBC-da ee Beershiya ayaa iyana loo soo diray farrin aysan aqoon qofka u soo diray, waxaana laga dalbaday in ay joojiso shaqada ay u haysa BBC-da, waxaana loogu hanjabay in la dhibaateyn doono wiilkeeda oo toban sano jir ah oo qofkii farriinta soo diray uu sheegay in uu garanayo iskuulka uu dhigto.
Hooyada weriye kale oo ka tirsan BBC Beershiya ayaa dhawaan looga yeeray xarunta sirdoonka waddankaasi Iiraan, waxaana loo sheegay in wiilkeeda shil baabuur uu ku dhiman doono haddii la sii shaqeeyo BBC-da. Hanjabaaddaasi ayay hooyadaasi si dhab ah u qaadatay, waxaana iyada la mid ahaa booliska la dagaalanka argagixisada ee London oo durbadiiba ku dhaqaaqay sidii ay amnigiisa u sugi lahaayeen.
Xannibaadda hantida shaqaalaha BBC-da
Inkabadan 20 weriye oo ka tirsan laanta Beershiya ama xitaa xubnaha qoyasaskooda ayaa dhawr jeer loo hanjabay, waxaana boolisku ku khasbanaadeen in ay shaqaalahaasi siiyaan ilaalo.
Kaddib sanado badan oo ay handadaad iyo cabsi gelin wajahayeen shaqaalaha BBC-da ka soo jeeda Iiraan ayaa BBC-du waxay hadda billowday in ay baaq u dirto beesha caalamka, iyadoo si toos ah cabashadeeda ugu gudbineysa Qaramada Midoobey.
Tony Hall oo ah agaasimaha guud ee BBC-da ayaa sheegay in hadda ay go’aansadeen in ay cabashadooda toos ugu gudbiyaan Qaramada Midoobey maadaama ay ku guuldareysteen in mas’uuliyiinta Iiraan ay ku qanciyaan in ay joojiyaan dhibaatada ka dhanka ah shaqaalaha BBC-da.
Image captionMaxkamad ayaa dowladda Iiraan ku amartay in ay xannibaad ku soo rogto hantida 152 qof oo BBC-da u shaqeeya
Baaqa BBC-da ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Iiraan ay sare qaaday ololaheeda ka dhanka ah weriyeyaasha BBC-da.
Dowladda Iiraan ayaa 152 qof oo isugu jira shaqaale hore iyo kuwa hadda BBC-da ka hawlgala waxa ay ku eedeysay in ay maleegeen qorsheyaal lid ku ah amniga qaranka, waxa ayna qaarkood ku billowday baaritaanno.
Dowladda Iiraan ayaa sidoo kale xannibaad ku soo rogtay hantida weriyeyaal badan oo u shaqeeya BBC-da.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa kal hore ugu baaqay dowladda Iiraan in ay joojiso dacwadaha ka dhanka ah shaqaalaha BBC-da iyo qoysaskooda iyo sidoo kale suxufiyiinta kale.
Qiyaastii 18 milyan oo qof ayaa ku xiran wararka iyo barnaamijyada BBC-da ee ku baxa luuqadda Faarsiga.
Kaddib doorashadii muranka dhalisay ee sanadkii 2009 ayaa malaayiin qof oo reer Iiraan ah waxa ay isugu soo bexeen waddooyinka, iyaga oo sheegayay in codadkii ay dhiibteen lagu shubtay.
Eedeymahaasi ayaa sababay in muudo bilo ah ay xasilooni darro ka dhacda dalkaasi, waxaana mas’uuliyiintu ay arrimahaasi ku eedeeyeen Mareykanka, UK, BBC iyo dowlada kale oo reer galbeed ah.
Weriyaha BBC-da Jon Leyne oo xilligaasi ka hawlgali jiray Tehraan iyo weriyeyaal kale oo u shaqeynayay warbaahinno caalami ah ayaa dalka laga soo musaafuriyay.
Bishii Oktoobar ee sandkii 2017, ergayga Qaramaa Midoobey mas’uulka uga ah baaritaanada dhibaatooyinka ka dhanka ah xaquuqul insaanka dalka Iiraan ayaa arrinta weriyeyaasha BBC-da kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamad Javad Zarif.
Ilaa iyo haatan dowladda Iiraan kama aysan ahdlin eedeymaha ah in ay dhibaato ku haysa weriyeyaasha BBC-da ee dalkeeda ka soo jeeda.